सन् १ 198 in founded मा स्थापना भएको चाइना इन्टरनेशनल ब्यूटी एक्सपो (गुआंगझाउ) पहिले क्यान्टन ब्यूटी एक्सपोको रूपमा चिनिन्थ्यो। ऐतिहासिक विश्व-प्रसिद्ध सौन्दर्य उद्योग व्यापार मेलामा पेशेवर सौन्दर्य, कपालको देखभाल र स्टाइलि cosmet, कस्मेटिक, व्यक्तिगत हेरचाह, र शीर्ष-देखि-तल आपूर्ति CH सम्मिलित छ ...थप पढ्नुहोस् »
मेभोस एस्थेटिक सर्जरी र मेडिसिन २०२० समरको अन्तर्राष्ट्रिय कांग्रेस
MEVOS एस्थेटिक सर्जरी एन्ड मेडिसिनको अन्तर्राष्ट्रिय कांग्रेस, प्लास्टिक सर्जरी उद्योगमा विश्व नेताहरुलाई भेला गर्ने, अन्तर्राष्ट्रिय टेक्नोलोजी र शैक्षिक अत्याधुनिक विज्ञानको प्रगतिबारे छलफल, आधिकारिक नेताहरुको सोच बिचार अध्ययन र सु ...थप पढ्नुहोस् »
अन्तर्राष्ट्रिय चलन, उच्च-टेक र डिजाइन प्रवृत्ति, साथ साथै नयाँ पुस्ता उपभोक्ताहरूको नयाँ आवश्यकताहरूमा ध्यान केन्द्रित गर्दै दक्षिण चीन अन्तर्राष्ट्रिय सौन्दर्य मेलाले स्मार्ट ब्यूटी न्यू रिटेल, ई-ब्यूटी, ट्रेंड स्पेस, नयाँ ब्रान्ड जस्ता विशेष प्रदर्शनी क्षेत्र स्थापना गरेको छ। क्षेत्र, सौन्दर्य I ...थप पढ्नुहोस् »
UV लाईटको बारेमा
१. सबै भन्दा पहिले, तपाईले बुझ्नुभयो यूभी प्रकाश के हो? यसले के गर्छ? UV अल्ट्राभायोलेट किरण, वा अल्ट्राभायोलेट लाइटको एक संक्षिप्त रूप हो, तरंगदैर्ध्य १०० देखि n०० एनएमको दायराको साथ, जुन एक्स-रे र देखिने प्रकाशको बीचको इलेक्ट्रोमैग्नेटिक तरंगहरू हुन्छ। यसको मतलब यो प्रकाश एक हो ...थप पढ्नुहोस् »